'Hitman: Absolution - Elite Edition', amidy mandritra ny fotoana voafetra | Avy amin'ny mac aho
Ny lalao mahafinaritra Hitman: Absolution - Elite Edition hita ao amin'ny Mac App Store ho an'ny marina € 9,99, Fotoana voafetra. Ny lalao dia nofidina ho iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny Mac App Store tamin'ny 2014 (Mac App Store tsara indrindra tamin'ny 2014).
Ao amin'ny lalao ianao dia ho lasa ny Agent 47, mpamono olona noforonina avy amin'ny fototarazo, ary mampiasa ny fahaizany ho zavakanto hamonoana olona. Hanana reflexes hafahafa ianao, teknika miafina famoronana ary fitaovam-piadiana mahery vaika. Ao ny lalao español, ary avelanay ianao a gameplay amin'ny lalao.
Tsy maintsy miaro tovovavy marefo avy amin'ny tontolon'ny heloka bevava mampalahelo. Hiankina aminao irery ihany no hahafahanao mamonjy ilay zazavavy ary manafoana ny fahavalonao amin'ny fomba rehetra azo atao eo am-pelatananao. Manoro hevitra anao aho hamaky ny fepetra farafahakeliny fa ny Mac-nao dia tsy maintsy milalao azy io, azonao atao ny manamarina azy ao amin'ilay rohy avelantsika any amin'ny faran'ny lahatsoratra, ary jereo ao amin'ny Mac App Store, satria mila fampiasa 2.0 GHz farafahakeliny ianao, RAM 4GB, 512MB Graphics Board sy habaka malalaka amin'ny kapila anao 24GB.
Hitman: Absolution - Elite Edition misy koa 'Hitman: Sniper Challenge', iraka iray manokana izay mihantsy anao hanao hetsika mampidi-doza nefa tsy mamela soritra, tsy mampiasa afa-tsy ny fahaizanao mitifitra marina.
nohavaozina: 05 / 12 / 2014
Malagasy Bible: 1.0.3
habe: 20.25 GB
fiteny: Espaniôla, alemanina, frantsay, anglisy, italianina, poloney, rosiana, tiorka
mifanentana: OS X 10.9.2 na taty aoriana.
Azonao atao ny mividy ny lalao 'Hitman: Absolution - Elite Edition', mivantana avy ao amin'ny Mac App Store fipihana ny rohy manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Hitman: Absolution - Elite Edition, amidy mandritra ny fotoana voafetra